Web Developer တစ်ယောက်ဆိုတာ – Live the Dream
Web Developer တစ်ယောက်ဆိုတာ
Web Developer အလုပ်ဆိုတာ
ခုခေတ်မှာ တစ်ခုခုကို သိချင်ရင် ဘယ်သူ့ဆီမှ မေးနေစရာမလိုအောင် အင်တာနက်ပေါ်က website တွေက ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ပြောရင် လွန်မယ်မထင်ပါနဲ့။ Google မှာ ရိုက်ရှာမယ်.. ကျလာတဲ့ website တွေကနေတစ်ဆင့် သိချင်တာတွေ သိရမယ်။ ဒီလိုအချက်အလက်များစွာကို ရရှိဖို့အတွက်တော့ လွယ်ကူလွန်းလှပေမယ့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စတဲ့အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး သိနိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ Website တွေကို ဖန်တီးပေးတဲ့ Web Developer တွေရဲ့ ပညာကတော့ ကျယ်ပြန့်နက်နဲလွန်းပါတယ်။
၁. Client Side Scripting- Websiteတစ်ခုထဲဝင်ရင် တွေ့ရမယ့် website အပြင်အဆင် ဒီဇိုင်းကာလာတွေ၊ အသုံးပြုနိုင်မယ့် functions အားလုံးအတွက် programရေးသားရတဲ့အပိုင်း။
၂. Server Side Scripting- ဒါကတော့ Website ပေါ်မှာ သိချင်တာတွေကို မြင်ရအောင် Website Sever ကနေ ဆောင်ယူပေးပြီး ကျွန်တော်တို့ နှိပ်သမျှ ခိုင်းသမျှကို နောက်ကွယ်က အလုပ်လုပ်ပေးမယ့် Program တွေကို ရေးသားရတဲ့အပိုင်း။
၃. Database Technology – Website တစ်ခုလုံးကောင်းမွန်ချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးမယ့်အပိုင်း စသည်ဖြင့် အပိုင်းသုံးပိုင်း ရှိပါတယ်။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ Programming တွေကိုအဖော်ပြုရင်း Web Developer တွေက အခုလို သတင်းအချက်အလက်လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာသိရှိနိုင်အောင်၊ အဆင့်မြင့် လူနေမှုစနစ်တစ်ခု ဖြစ်လာအောင် နောက်ကွယ်ကနေ ထောက်ပံ့ပေး နေကြတဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Web Developer တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်း
ခုခေတ်မှာတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Web Developer တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေလည်း ရှိတာမို့ ဝါသနာပါရာ လမ်းကြောင်း လိုက်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူလာပါပြီ။
အစိုးရနည်းပညာ တက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အထူးပြု သင်ယူနိုင်သလို အပြင်သင်တန်းကျောင်းတွေမှာလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အစိုးရနည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင် IT Major အထူးပြုနဲ့ ၆နှစ်တက်ရောက်ပြီး B.E(IT) ဘွဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာတော့ ၅နှစ်နဲ့ B.C.Sc ဘွဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ Local ကနေ ဖွင့်ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်း ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်း တွေမှာလည်း Web Development ဆိုင်ရာကို အခြေခံမှ ကျွမ်းကျင်သည်အထိ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် Self-study လုပ်ချင်သူတွေ အတွက်ကတော့ Tutorialspoint, Udemy, Futurelearn စတဲ့ Website တွေကနေတစ်ဆင့် အခမဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီပညာရပ်မှာ ကျောင်းက သင်တာ တစ်ခုတည်းနဲ့ လုံးဝ မလုံလောက်ပါဘူး။ နည်းပညာပိုင်း ဆိုတာ စမ်းသပ်လေလေ တွေ့ရှိလေလေ၊ လေ့လာလေလေ ကျွမ်းကျင်လေလေပါ။ ဒါကြောင့် Self-study အပြင် ကိုယ်ပိုင် စမ်းသပ်လေ့လာမှု၊ ရှာဖွေစူးစမ်းမှုကို အထူးအားစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ Website ရေးသားနည်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သိနေပြီ၊ တော်တော်လေးလည်း နားလည်နေပြီ၊ လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ဝါဿနာတူအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး အပြင် Project တွေကို လက်ခံလုပ်ကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ IT Company တွေမှာ Internship ဆင်းပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲလိုမျိုးကနေ Web Development ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတွေ ပိုမို ရရှိအောင်၊ အသိပညာပိုမိုကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ အချိန်ကာလ တစ်ခုပြီးရင် Professional အနေနဲ့ ရပ်တည်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Web Developing ပိုင်းက နက်နဲရှုပ်ထွေးလွန်းတာမို့ ရူးရူးမူးမူး စိတ်ပါဝင်စားသူ ဖြစ်ဖို့ အထူးလိုအပ်သလို လိုအပ်တဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Computer programming ဘာသာရပ် တွေကို အသေးစိတ် လေ့လာ လိုက်စားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Web Developing မို့ Website ရေးနိုင်ရုံ၊ Coding တွေရေးတတ်ရုံနဲ့ လုံလောက်တယ် မထင်ပါနဲ့ Website တစ်ခုကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပထမဆုံး မြင်ရတဲ့ ဒီဇိုင်းဆိုတာကလည်း အရေးပါသေးတာမို့ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အမြင်တစ်ချို့၊ ဗဟုသုတတစ်ချို့တော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ Creation ကောင်းဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Website ဖန်တီးရာမှာ Coding တစ်ခု မှားသွားတာနဲ့ Website တစ်ခုလုံး Error ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ စေ့စေ့စပ်စပ် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ Web Developer တစ်ယောက် အတွက် ကိုယ့်ကို အလုပ်အပ်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ၊ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်လို့ Negotiation Skills နဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံမှု စွမ်းရည်ကို လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်တွေက Pressure နဲ့ ပြဿနာ များနိုင်လွန်းတာမို့ Pressure ခံနိုင်ခြင်းနဲ့ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဓိက အလိုအပ်ဆုံးကတော့ Web Developing အပေါ် ရူးသွပ်မှု၊ စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ်နဲ့ မလျော့သော ဇွဲတို့က ပဓာနပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ တက္ကသိုလ်တွေမှာ တက်ရောက်သင်ယူမယ် ဆိုရင်တော့ နေစားစရိတ်တို့အပြင် ပညာသင်စရိတ်က ကြီးကြီးမားမား ကုန်ကျစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာကို လေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ Laptop တစ်လုံးလောက် ပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အချိန်တိုအတွင်း သင်ယူ တတ်မြောက်နိုင်တဲ့ အပြင်သင်တန်းတွေမှာ ဆိုရင် ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ ကျောင်းအလိုက် သင်တန်းကုန်ကျစရိတ် ကွာခြားမှု ရှိပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အနေနဲ့ Web Developing Class တွေက ပျမ်းမျှ အနည်းဆုံး (၁)သိန်း ဝန်းကျင်ကနေ (၅)သိန်းလောက်အထိ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။
Web developer ဆိုတာ မိမိရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ Professional အလုပ်အကိုင် တစ်ခုပါ။ Web Developer တွေအနေနဲ့ Company မှာ Full-time ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်သူတွေ ရှိသလို၊ Freelancer အနေနဲ့ ရပ်တည်နေကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အရည်အချင်းနဲ့ အတွေ့အကြုံအလိုက် ဝင်ငွေရရှိမှုနှုန်း ကွဲပြားနိုင်ပေမယ့် ပုံမှန်အားဖြင့် Full-time Web Developer တွေက (၅) သိန်းဝန်းကျင်ကနေ (၁၀) သိန်းလောက်အထိ ရရှိကြပါတယ်။ Freelancer တွေ အနေနဲ့ကတော့ Project size အပေါ် အဓိက မူတည်တာဖြစ်လို့ အလုပ်ရှင်နဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်မှု အလိုက် ဝင်ငွေကွာခြားသွားမှာပါ။
နည်းပညာခေတ်မှာ နည်းပညာအလုပ် မရှားတာကိုတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင်လည်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးလာတာနဲ့အမျှ နည်းပညာဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းသူတွေကို ပိုမို လိုအပ်လာပါပြီ။ Web Developer တွေအနေနဲ့ Website Development လုပ်ငန်း၊ Digital Media Marketing လုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာအကြံပေး လုပ်ငန်း၊ Computer System Design လုပ်ငန်း စတဲ့ IT ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွေမှာ ဝင်ရောက် နိုင်သလို အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွေမှာလည်း ကုမ္ပဏီရဲ့ IT Department မှာ အရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကနေ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ Web Developer တွေဟာ ဝင်ငွေအများဆုံး အလုပ်အကိုင်တွေထဲက တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေရာတကာ နည်းပညာကို အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ အသုံးပြုနေရတဲ့ ဒီနေ့လို ခေတ်မျိုးမှာတော့ Web Developing ရဲ့ အနာဂတ်ကို အထူးတလည် ရှင်းပြနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ နောက်အနာဂတ်မှာ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါလာလိမ့်မလဲလို့ တွေးဆနေရုံ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Website အသုံးပြုမှု အားနည်းသေးပေမယ့်လည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာနေသလို နောက်မကြာခင် နှစ်အတွင်းမှာ ရေပန်းအစားဆုံး အလုပ်အကိုင်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ နယ်ပယ်အသီးသီး ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ Website တွေရဲ့ နေရာယူမှု ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့ အမျှ Website ဖန်တီးရေးသားသူ Web Developer တွေ က ပိုပိုပြီးအရေးပါသလို အချက်အလက်များစွာအတွက် Web Developer တွေကို အားကိုးနေရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ် အရပ်ရပ်မှာ Website တွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေသ၍တော့ Web Developer တွေရဲ့ အရေးပါမှုက ဆက်လက် တည်ရှိနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။